HAMRAKHABAR | » डाेटीमा पेट्रोल छर्केर निर्दयी बाबुले आमा छाेरीलाई आगाे लगाउदा ….. डाेटीमा पेट्रोल छर्केर निर्दयी बाबुले आमा छाेरीलाई आगाे लगाउदा ….. – HAMRAKHABAR
डाेटीमा पेट्रोल छर्केर निर्दयी बाबुले आमा छाेरीलाई आगाे लगाउदा …..
आदर्श केसी, काठमाडौँ
कोरोना महामारीले जताततै अवस्था आक्रान्त छ । हजारौँ बिरामीहरु आफन्तको सहारामा मृत्युसंग संर्घष गरिरहेको छन । यस्तै परिवेशमा एउटा कारुनिक दृष्य बुधवार किर्तिपुरकाे फेक्ट माेडेल अस्पतालकाे एउटा शैयामा देखिन्थ्यो । घटना काेराेना सँग सम्बन्धित नभएर फरक पिडादायि र हृदयविदारक थियो । काेराेनाले अस्पताल भर्ना भएकाहरुले विश्वब्यापी प्रकोप भनेर चित्तवुझाउने ठाउँ भएपनि यस दृष्यमा भने चित्त बुझाउने कुनै ठाउँ थिएन । बिरामी हुदाँ जस्तो जटिल अवस्थामा परिवारका सदस्य अझ श्रीमतिलाई श्रीमान र श्रीमानलाई श्रीमतीको साथ चाहिन्छ तर यस दर्दनाक घटना ठिक उल्टो छ । जीवनका हरेक सुख, दुखमा संगै सहकार्य गरौला भनेर बैवाहिक बन्धनमा बाधिएका श्रीमान नै अपराधिक भएपछि मानवीय भावनामा नै जटिल प्रश्न उठेको छ । डाेटीकाे आदर्श गाउँपालिका ४ का सन्ताेष भाटले गएको जेठ १२ गते पेट्रोल खन्याएर श्रीमती र छाेरीलाई पासविक घटना घटाए । आमा छोरीलाई एउटा कुर बावुले झ्यालबाट अपरिचित व्यक्तिको भेषमा पेट्रोल खन्याएर आगो लगाएर ढोका थुनिदिन्छ । आफु र आफ्नो छोरी बचाउन अनेकाैँ प्रयास गर्दा गदै उनको शरिरमा आगो लाग्छ निक्कै बेरको हारगुहारपछि गाउँलेहरु घटनास्थल आउछन् र अभियुक्त श्रीमान भाग्छ।
बुधवार विरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिन हामी अस्पतामा पुग्दाको दृष्य पनि निकै कारुणीक थियो । जताततै जलेको शरिरको दुखाईले आक्रान्त आमा वेडमा लडिरहदा २ वर्षीय बालिका मनोभावनात्मक रुपमा बिछिप्त देखिन्छन । हामी अस्पताल पुग्दा २ वर्षकी अञ्जलि भाट छट्पटी रहेकी आफ्नो आमाको नजिकै गइन् र हामी तर्फ हेरिन ।उक्त घटना बाट डराएकि बालिकाले हामीलाई पनि आफ्नो आमालाई आक्रमण गर्न आएको जस्तो मानेर आमालाई बचाउन नजिकै गएको जस्तो भाव देखाइन्।उनको खुट्टामा चप्पल नै थिएनन् ।चप्पल किन्ने पैसा नभएर उनको खुट्टा खालि भएको हाे । सायद काेराेनाकाे कारणले निषेधाज्ञा नभएको भए अहिले अधिकारकर्मीहरुले यहि विषयमा सडक तताउदा हुन ।तर यो घटनाको धेरै चर्चा नहुदा कतिपयलाई थाहा नै छैन ।
आमा छाेरी सँगै जलाउन खाेजिएकाे घटनाको सुरुवात ….
गत जेठ १२ गते राती ११ बजे, डोटी जिल्ला आदर्श गाँउपालिका वडा ४ की २८ वर्षीय लक्ष्मी भाट सानो कोठामा रहेको एउटा पसलमा सुतेकी थिइन् । साथमा उनकी दुइ वर्षकी छोरी अञ्जली भाट पनि थिइन् । आमा छोरी निदाउने सुरसारमा थिए । त्यतिबेला कसैले सानो खुद्रा पसलको प्वालमा पाँच लिटरको जरकिन बाट तेल जस्तै तरल पदार्थ भित्र खसाली रहेको लक्ष्मीले देखिन । संकास्ष्पद गतिबिधि भएपछि लक्ष्मी अत्यालिएर बाहिर निस्कन खोजिन् । तर बाहिरको मान्छेले त्यतिबेला नै भित्र त्यही तरल पर्दाथमा आगो लगायो । उक्त पदार्थ पेट्रोल वा डिजेल भएको स्थानीय बताउँछन् ।
लक्ष्मी र २ वर्षकी छोरी आगोमा जल्न थाले । साँघुरो कोठामा बलिरहेको आगो ज्यान जोगाउन आमा छोरीले ठुलो युद्ध गरे । बाहिरबाट आगो लगाउने मान्छेले ढोका समेत थुन्यो । भित्र बाट निस्कने लाख प्रयास गरेपनि सम्भव भएन । लक्ष्मीको चिच्याहट धेरै भएपछि नजिकैका छिमेकी कसैले सुने । त्यतिबेला बाहिरको मान्छे भाग्यो । लक्ष्मी बल्लतल्ल ढोका खोल्न सफल भइन । आफु जलेर छोरीलाई बचाइन । दुइ वर्षको छोरी अञ्जलीकाे पनि केही भाग जल्याे। लक्ष्मी कराउदै बेहोस अवस्थामा खोला तिर भाग्दै गरेको थप गाँउलेले थाहा पाए । लक्ष्मीको शरीरको करिब ४० प्रतिशत जति भाग अशक्त हुने गरि जलेको थियो ।
घटना घटेको लगतै छिमेकी सुसुरा नाता पर्ने सुरेश भाट र अन्य छिमेकी जलिरहेको पसलमा पुगे । घटनास्थलमा पुगेकालाई सबैभन्दा बढि डर सानी छोरी अञ्जली आगोमा जलिरहेको हुन सक्ने अनुमान थियो । अञ्जलीलाई लक्ष्मीले बाहिर त निकालिन तर आफु अचेत हुदै भागिन्। नजिकै कुनामा लुकेर बसेकी अञ्जलीलाई जिवित फेला पारेपछि छिमेकीहरु खुसी भए । लक्ष्मीको शरिर नराम्रो सँग जलेका कारण तत्काल अस्पताल लिनुपर्ने थियो । अर्को गम्भिर कुरा लक्ष्मीको पेटमा पाँच महिनाको गर्भ थियो । जतिसक्यो छिटो लक्ष्मीको ज्यान जोगाउन गाँउलेहरु अस्पताल दौडिए । घटना निकै रहस्यमय भयो । घटनाको बारेमा प्रहरीलाई खबर भयो । प्रहरीले घटनाको छानविन सुरु गरेपनि अहिलेसम्म कसैलाई पक्राउ गरेको छैन् । गाँउले र प्रहरीको संकाको सुइ उनका श्रीमान सन्तोष भाट तिर गयो ।त्यसलाई थप पुष्टि गर्दै लक्ष्मीका श्रीमान पनि घटनाको दिन देखि फरार भए ।
किन ढिला उद्धार ?
लक्ष्मीको जलेको शरीर चानचुने उपचारले सम्भव थिएन् । घटनाको भोलीपल्ट एसपी दान बहादुर मल्ललाई घटना बारे जानकारी हाम्रा खबरले लिदा घटना सामान्य हो । हामी अनुसन्धान गर्दै छौ,एसपीले हामीलाई जवाफ दिएका थिए। साथै एसपी मल्लले अस्पताल बाट दुइ तिन दिनमा लक्ष्मी डिस्चार्ज हु नसक्नेसमेत बताएका थिए । त्यतिबेला लक्ष्मीको दिपायलको सुजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो ।
घटनाको चार दिनपछि हाम्रा खबरले फेरि डाेटीका प्रहरी प्रवक्ता इन्द्रबहादुर मल्ल सँग थप जानकारी लिएको थियोे ।उक्त समयमा पनि डिएसपी मल्लले घटना नर्मल भएको र खाेजि कार्य भइरहेको जवाफ दिएका थिए ।विभिन्न मानव अधिकारबादी संघसस्थाको दबाबमा र त्यही क्षेत्रका नेता तथा बनमन्त्री प्रेम बहादुर आलेमगरको पहलमा घटना घटेको १० दिनपछि हेलिकप्टर बाट लक्ष्मीलाई थप उपचारको लागि काठमाडौँ पु¥याइएको छ । बुधबार मानव अधिकारकर्मी खगेन्द्र ओली सहित हाम्रो टोली काठमाडौँ किर्तिपुर स्थित फेक्ट अस्पतालमा लक्ष्मीको अवस्था बुझन पुग्दा प्रहरीले भनेको जस्तो घटना सामान्य लागेन्।
लक्ष्मीको उपचारमा निरन्तर खटिरहेका डाक्टर तथा अस्पतालका डाइरेक्टर सँग बुझ्दा लक्ष्मीको अवस्थामा सुधार आउन अझै केही समय लाग्ने उनीहरूले आशा व्यक्त गरे । त्यतिबेला मैले उनै एसपी दान बहादुर मल्ल सँगको संवाद सम्झे । समाजमा घटेका सम्पुर्ण घटनाहरुको सुचना माथिल्लो स्तरसम्म रिर्पोटिङ गर्ने जिम्मा प्रहरीको हुन्छ । प्रहरीले जस्तो रिपोर्ट दिन्छ त्यही आधारमा माथिल्लो निकाय तथा सम्बन्धित अधिकारी देखि मन्त्रीले घटनाहरु बारे थप कमद चाल्ने हो । तर यस्ता गम्भिर घटनालाई पनि प्रहरीले आफनो कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्ने तथा थप दबाब आउने ,विभिन्न आन्दोलन हुने र झन्झट हुने कारणले रिपोर्टिङमा हजुर ,ठिक छ,सामान्य छ, गम्भीर छैन हजुर, भनेर रिपोर्टिङ गर्ने आराेप लाग्ने गर्छ ।घटना सामान्य छ भनेर तलबाट प्रहरीले माथिल्लो निकायमा जानकारी गराउने तर घटना चाहिँ गम्भीर प्रकृतिका हुने यहि कारणले प्रायः प्रहरीको नेतृत्व र सरकार आलोचित हुने रहेछ, भन्ने अनुभुति पनि यहि घटना बाट पनि थाहा पाइयो ।
हाल लक्ष्मीको अवस्था कस्तो छ ?
घटनाको सुरुवात देखि हाल सम्म विभिन्न तरिकाले घटनाको सुचना संकलन गरिरहेका फ्रिडम फर अल नेपाल (फान) का महासचिव तथा मानव अधिकारकर्मी खगेन्द्र ओलीका अनुसार लक्ष्मी सँगै पेट भित्रकाे बच्चाको ज्यान जाेगाउनु अहिलेकाे मुख्य चुुनाैति हाे ।डाक्टरको भनाइ उदृत गर्दै ओली भन्छन् बिस्तारै बोल्न सुरु गरेकि लक्ष्मीकाे केहि दिनमा अप्रेशन गर्ने तयारी हुदै छ । उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर किरण नकर्मी पनि आमा र बच्चाको ज्यान जोगाउने गरि उपचार भइरहेको बताउँछन् । लक्ष्मीको रगतमा हेमोग्लोविनको मात्र कम छ अर्थात् पाँच मात्रै छ, अप्रेशनको लागि उक्त मात्रा १० चाहिन्छ । त्यसको लागि उनलाई थप रगत दिनुपर्छ ।गृहमन्त्रालयले अस्पताललाई पत्र लेखेर उपचारमा कुनैकमी नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै प्रकृतिका गरिब पैसा तिर्न नसक्ने खालका वर्षमा २० देखि ३० जना जति विरामीलाई निशुल्क उपचार गदै आएको उक्त अस्पतालले लक्ष्मीको उपचारमा पनि उस्तै चासो र सक्रियतापुर्वक उपचार गरिरहेको छ ।
दोषीलाई कारबाहीको प्रकृया कहाँ पुग्यो ?
लक्ष्मी माथी किन यस्तो आक्रमण भएको भन्ने स्पष्ट छैन् । तर उनका श्रीमान सन्तोषले कान्छी श्रीमती ल्याएर गाँउमै बसेका थिए । सम्बन्ध राम्रो थिएन् घटना घटेको दिन सन्तोष धनगडी या जिल्ला बाहिर बाट गाडी लिर गाँउ पुगेका थिए । उनी ड्राइभर पेशामा आवद्ध थिए । घटना घटेको दिन गाँउ पुगेका सन्तोष भोलीपल्ट देखि बेपत्ता छन् । त्यस कारणले पनि घटनामा उनको संलग्नता पुष्टि हुन्छ । प्रहरीले उनलाई समाउन नसकेपनि लक्ष्मीका दाइले सन्तोषका नाममा दिपायल प्रहरीमा किटानी सहित ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्धादर्ता गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सन्तोष भागेर भारत तर्फ गरेको बताइन्छ ।
लक्ष्मीको आर्थिक अवस्था विजोग
लक्ष्मीलाई साथ दिने दरिलो कोही थिएन्। उनी गाँउमै सानो पसल थापेर गुजरा चलाउथिन् । श्रीमान सन्तोष केहि समय देखि रेखदेख गर्दैन्थ्ये । अत्यन्तै कमजोर आर्थिक अवस्था भएकी लक्ष्मीलाई दैनिक छाकटार्न पनि धौ धौ थियो, हाल काठमाडौमा लक्ष्मीको कुरुवा गदै आएका स्थानिय अंकल नाता पर्ने सुरेश भाट बताउँछन् । अहिले सुरेश आफ्नो श्रीमती सहित काठमाडौंमा लक्ष्मीको साहारा बनेका छन् ।
लक्ष्मीको छोरी तर्फ देखाउदै सुरेश भन्छन् हामी सँग पनि पैसा छैन,यी नानिको खुट्टामा चप्पल छैन् । उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भनेको छ ,२५ हजार मन्त्रीले दिनु भएको थियो,के के किन्दा सकियो । दिनहुँ अस्पतालमा लक्ष्मीको अवस्था बुझ्न जानेहरुले केही समस्या परे भन्नु भन्दा सुरेश ठुलो मन गर्छन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग,महिला आयोग लगाएतका विभिन्न निकाय तथा संघसंस्थाका प्रतिनिधीहरु प्रायः लक्ष्मीको अवस्था बुझन अस्पताल पुग्ने गरेका छन ।लक्ष्मीकाे उपचार निशुल्क सरकारले गरेपनि उनले छाेरि हुर्काउन र जिन्दगी चलाउन अब निकै मुश्किल हुने सुरेश बताउँछन् ।